Kedu ụzọ ha ga - esi mepụta ndepụta dị elu PR backlink?
Ogoro nile nke ulo oru ntanetị choro inwe usoro ahia ahia iji deputa akwukwo nke mbu ma obu abuo. Usoro nyocha ọ bụla nke search engine choro otutu backlinks. N'ihe mmelite Google ikpeazụ, ndị a backlinks kwesịrị ịdị elu ma na-abịa site na ebe nrụọrụ weebụ PR dị elu. A na-ewere ihe ọ bụla ọzọ backlinks dị ka obere mma na spammy - protank 3 coil resistance measurement. Ọ bụ ya mere onye nlekọta ọ bụla ji chọọ nlezianya anya banyere àgwà azụlinks ọ na-ewuli ogo nke njikọ na-abata ịchọta ebe ebe nrụọrụ gị ga-etinyere na engines ọchụchọ maka mkpụrụokwu okwu kpọmkwem.
Ya mere, ajụjụ a bụ otu esi emepụta saịtị dị elu site na saịtị PR n'azụghị ọtụtụ ego na mgbalị?
N'ihe banyere njikarịcha ebe nrụọrụ weebụ na engines ọchụchọ, iwu nke 4 V na-arụ ọrụ kacha mma:
Ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ ka bụ ihe dị mkpa. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị cheta na ọtụtụ backlinks si weebụsaịtị spammy, ọ gaghị enye gị uru.
Isi ihe dị iche iche ị na-eji maka njikọ ụlọ njikọ. Ka o sina dị, mma ka ọ na-egosi Google ọtụtụ weebụsaịtị na-adọta ngalaba gị dị ka ndị a ma ama na njikọ bara uru.
ọsọ ị na-enweta njikọ gị na saịtị gị. Google nwere ike ịchọta ya enyo ma ọ bụrụ na ị ga-ewu ọtụtụ backlinks n'abali. Kama nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịmepụta njikọ dị mma nke na-adọrọ adọrọ na mgbe niile.
Ihe okwu arịlịka na njikọ gị na saịtị. Oyomde ederede ederede nke ọma, ichota ma tinye otu n'ime okwu ọchụchọ gi.
Ndepụta nke saịtị PR dị elu maka backlinks mma ụlọ
saịtị ndị na-esonụ bụ ebe zuru okè maka mgbasa ozi azụlink:
Ọ bụ ihe dị elu dị na peeji nke PageRank nke na-enye ndị nwere ebe nrụọrụ weebụ ọtụtụ ohere mgbasa ozi. Otu n'ime ala ala nke ikpo okwu a bụ na ha nwere "iwu na-esote" iwu ụlọ. Ọ pụtara na inweta backlinks si na Facebook agaghị agafe ihe ọ bụla njikọ njikọ gị na ngalaba. Otú ọ dị, backlinks sitere na isi iyi a nwere ike ime ka njikọta njikọ gị dịkwuo nkwenye ma kwenye na Google.
Ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ PR9 nke Google nwere. Ọ na-enye webmasters na backlinks dofollow na nofollow. Ị nwere ike ịmepụta backlinks dofollow na profaịlụ azụmahịa gị ma ọ bụ nkọwa vidiyo. All njikọ ndị ọzọ ga-abụ ala. Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịgbanye chanel YouTube gị na otu PR5 na PR6 backlink. O nwere ike imetụta ọnọdụ gị.
Google bụ ebe nrụọrụ weebụ PR8. Ọ bụ azịza Google na Facebook. Lee ị nwere ike ịmepụta ma ọ dịkarịa ala otu backlinks dofollow na saịtị gị. Ọ bụ ohere magburu onwe ya maka mmelite gị dịka Google jiri usoro a dị ka akụkụ nke algọrithm ha. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmepụta Google+ nke na-agụnye ederede anchor na ọchụchọ ọchụchọ gị na Profaịlụ / Ihe mpaghara.